भागरथीका आफन्तले किन शव बुझ्न अझै गरे अस्वीकार ? - Nepalpatra Nepalpatra भागरथीका आफन्तले किन शव बुझ्न अझै गरे अस्वीकार ? - Nepalpatra
भागरथीका आफन्तले किन शव बुझ्न अझै गरे अस्वीकार ?
धनगढी । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका-७ की १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको हत्या गर्ने दिनेश भट्टलाई आज बुधबार प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । आज बुधबार दिउँसो २ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरेको थियो ।
दिनेशलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत बैतडीले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ तर पनि भागरथीका आफन्तले शव बुझ्न अझै अस्वीकार गरेका छन् । यसअघि भागरथीको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक नगरेसम्म शव नउठाउने अडान लिएका मृतकको परिवारले प्रहरीले अभियुक्त सार्वजनिक गर्दा समेत शव बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
मृतक भट्टका काका नाता पर्ने शिवराज भट्टले प्रहरीले अभियुक्त सार्वजनिक गरेपनि आफूहरु उनले दिएको भनिएको साबिती बयानमा विश्वस्त नरहेका कारण तत्काल शव नबुझिएको बताएका छन् । प्रहरीले बुधबार दिउँसो भागरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा दोगडाकेदार गाउँपालिकाकै प्रहरीकै शब्दमा अन्दाजी १८ वर्षीय दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो ।
सनातन माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ११ मा दिनेश भट्ट अध्ययरत हुन् भने भागरथी यहि विद्यालयको कक्षा १२ मा अध्ययनरत थिइन् । भट्टले आफ्नो अपराध र टाइमलाइनबारे प्रहरीलाई साबिती बयान दिएका छन् ।